“Tababarihii caruurnimadeyda ayaa saadaaliyay in aan noqon doono ciyaaryahan Juventus ah”…Emre Can – Gool FM
“Tababarihii caruurnimadeyda ayaa saadaaliyay in aan noqon doono ciyaaryahan Juventus ah”…Emre Can
(Juventus) 09 Luulyo 2018. Xidiga khadka dhexe reer Germany Emre Can ayaa kasoo muuqday shirkiisa jaraa’id ugu horeeyay ee kooxda Juventus tan iyo markii uu yimid kooxda Bianconeri.
Emre Can ayaa markii ugu horeesay uu kasoo muuqday saxaafada, kadib marka uu soo gaba gabeeyay tababarkiisa ugu horeeyay ee kooxda reer Talyaani ee Juventus ay ugu diyaar garoobeyso xili ciyaareedka cusub.
Xidigii reer Germany ayaa ka dhaqaaqay kooxda Liverpool xili ciyaareedkii dhawaan lasoo xiray, kadib markii ay yaraatay inuu kasoo muuqday shaxda kooxda reer England.
Can ayaa go’aansaday inuu tijaabiyo loolan cusub uu ku yeelan karo door weyn ee muuqda, sidaas darteey wuxuu heshiis cusub u saxiixay kooxda Bianconeri.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkaan joogo, riyadeyda waxay ahayd inaan halkan joogo, waxaa igaaga sheekeeyay taariikhda kooxda iyo ciyaartoydaba Sami Khedira, sidaas darteed farxaddayda marna lama sharaxi karo”.
“Macalinkeyga ugu horeeyay aan la shaqeeyay waayaheygii caruurnimo wuxuu ahaa Talyaani, wuxuuna ii sheegay in maalin maalmaha ka mid ah aan noqon doono xidig ka tirsan kooxda Juventus, waxaan maanta ka dhabeeyay riyada tan iyo yaraanteyda”.
“Waxaan helay dalabyo kala duwan suuqii lasoo dhaafay, laakiin markaan arkay dalabka Juventus, waxaan wax walba u dhaafay heshiiskan, waxaan diyar u ahay inaan wax walba ku soo bandhigo kooxdan weyn, waxaana kala shaqeyn doonaa macalinka meel kasta uu doonayo inaana kaga ciyaaro gudaha garoonka”.
Juventus iyo wakiilka Ronaldo oo qorshahaan u dagay Real Madrid
Wakiilka Ronaldo oo u sheegay Real Madrid in Juventus ay .......!!